ကနျြးမာရေးနှငျ့ညီညှတျပွီးခံတှငျးမွိနျစမေညျ့ သံပုရာသီးသနပျလုပျနညျး – Shangyimm
Posted on October 6, 2019 October 7, 2019 by Shangyi
လိုအပ်တဲ့ အမယ်များကတော့- (၁) သံပုရာသီး ၁၅ လုံး ၊ (၂) စမုန်စပါး ၁ ဇွန်း ( ထမင်းစားဇွန်းဖြင့် ) ၊ (၃) ငရုပ်သီးအစိမ်းမှုန့် ( တဇွန် ) ၊ (၄) စားဆီ ၂၀ ကျပ်သား ( အနည်းငယ်တိုးထည့်လဲရ) ၊
(၅) မုန်ညှင်းစေ့။ ဇီယာစေ့။မဆလာ။ ဆနွံး – နနွင်းမှုန့်(အသင့်အတင့်) ၊ (၆) သကြား ၁ ဇွန်း ( လဖက်စားဇွန်းဖြင့် ) ၊ (၇) လေလုံသောဖန်ဗူး ( ကြာရှည်စွာစားသုံးရန် )
ပြုလုပ်ပုံ။ ။သံပုရာသီးတွေကို ဆားနဲ့နယ်၍ ပုလင်းထဲထည့်ပါ။နေပူမှာ သုံး လေးရက် ထုတ်လှမ်းပီး အငံရည်တွေကို သွန်ပစ်လိုက်ပါ။ အသီးကို လေးစိပ်စိပ်ပီး အစေ့တွေကို ထုတ်လိုက်ပါ။
အိုးထဲမှာဆီထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ်မှာ ဆီဆူအောင်ထားပါ။ ဆီဆူလာရင် မီးပိတ်လိုက်ပီး စမုန်စပါး. မုန်ညင်းစေ့, ဇီယာစေ့, မဆလာ,ဆနွင်း,ငြုပ်သီးအစိမ်းမှုန့်,တို့ကိုထည့်မွှေပါ။
သံပုရာသီးစိပ် နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူအမွှာလေးတွေကို ထည့်မွှေပါ။ သကြား လဖက်စားဇွန်းတဇွန်းထည့်ပါ။ ( အချဉ်ပေါ့စေဖို့ ) အားလုံးရောမွှေပီးရင် သံပုရာသီးသနပ်ရပါပြီ။
ပုလင်းနဲ့ထည့်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှာထားပါ။ ( အကြာကြီးခံပါတယ် ) နံနက်ခင်း ထမင်းကြော်နဲ့ပဲစားစား,ဒံပေါက်နဲ့ပဲစားစား,ဆိတ်သား,ကြက်သားဟင်းနဲ့ပဲစားစား,
ပဲကုလားဟင်းနဲ့ပဲစားစား အရမ်းကိုလိုက်ဖက်ပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်သော သံပုရာသီးသနပ်ပါ။ သံပုရာသီးကို မှိုမတက်အောင် ဆီမြုပ်အောင်ထည့်ပေးထားပါ။ ဆားထပ်မထည့်ရပါဘူး။ ဆားနယ်ပီးသားမို့ပါ။
မှတ်ချက်။ ။အချဉ်ပေါ့ချင်ရင်တော့ လေးစိပ် အရင်ခွဲပီး ဆားနယ်, နေပူလှန်းပီးမှ ဆားရေသွန်ပီး ဆီသတ်ပေးပါ။ အချဉ်ကြိုက်သူဆိုရင်တော့ အလုံးလိုက်နေလှမ်းပီးမှလေးစိပ်ခွဲ ဆီသတ်တာပါ။ (ဒီနည်းလည်းပဲ သိပ်တော့ မချဉ်လှပါဘူး )
လိုအပျတဲ့ အမယျမြားကတော့- (၁) သံပုရာသီး ၁၅ လုံး ၊ (၂) စမုနျစပါး ၁ ဇှနျး ( ထမငျးစားဇှနျးဖွငျ့ ) ၊ (၃) ငရုပျသီးအစိမျးမှုနျ့ ( တဇှနျ ) ၊ (၄) စားဆီ ၂၀ ကပျြသား ( အနညျးငယျတိုးထညျ့လဲရ) ၊
(၅) မုနျညှငျးစေ့။ ဇီယာစေ့။မဆလာ။ ဆနှံး – နနှငျးမှုနျ့(အသငျ့အတငျ့) ၊ (၆) သကွား ၁ ဇှနျး ( လဖကျစားဇှနျးဖွငျ့ ) ၊ (၇) လလေုံသောဖနျဗူး ( ကွာရှညျစှာစားသုံးရနျ )
ပွုလုပျပုံ။ ။သံပုရာသီးတှကေို ဆားနဲ့နယျ၍ ပုလငျးထဲထညျ့ပါ။နပေူမှာ သုံး လေးရကျ ထုတျလှမျးပီး အငံရညျတှကေို သှနျပဈလိုကျပါ။ အသီးကို လေးစိပျစိပျပီး အစတှေ့ကေို ထုတျလိုကျပါ။
အိုးထဲမှာဆီထညျ့ပွီး မီးဖိုပျေါမှာ ဆီဆူအောငျထားပါ။ ဆီဆူလာရငျ မီးပိတျလိုကျပီး စမုနျစပါး. မုနျညငျးစေ့, ဇီယာစေ့, မဆလာ,ဆနှငျး,ငွုပျသီးအစိမျးမှုနျ့,တို့ကိုထညျ့မှပေါ။
သံပုရာသီးစိပျ နဲ့ ကွကျသှနျဖွူအမှာလေးတှကေို ထညျ့မှပေါ။ သကွား လဖကျစားဇှနျးတဇှနျးထညျ့ပါ။ ( အခဉျြပေါ့စဖေို့ ) အားလုံးရောမှပေီးရငျ သံပုရာသီးသနပျရပါပွီ။
ပုလငျးနဲ့ထညျ့ပွီး ရခေဲသတ်ေတာထဲမှာထားပါ။ ( အကွာကွီးခံပါတယျ ) နံနကျခငျး ထမငျးကွျောနဲ့ပဲစားစား,ဒံပေါကျနဲ့ပဲစားစား,ဆိတျသား,ကွကျသားဟငျးနဲ့ပဲစားစား,
ပဲကုလားဟငျးနဲ့ပဲစားစား အရမျးကိုလိုကျဖကျပွီးကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျသော သံပုရာသီးသနပျပါ။ သံပုရာသီးကို မှိုမတကျအောငျ ဆီမွုပျအောငျထညျ့ပေးထားပါ။ ဆားထပျမထညျ့ရပါဘူး။ ဆားနယျပီးသားမို့ပါ။
မှတျခကျြ။ ။အခဉျြပေါ့ခငျြရငျတော့ လေးစိပျ အရငျခှဲပီး ဆားနယျ, နပေူလှနျးပီးမှ ဆားရသှေနျပီး ဆီသတျပေးပါ။ အခဉျြကွိုကျသူဆိုရငျတော့ အလုံးလိုကျနလှေမျးပီးမှလေးစိပျခှဲ ဆီသတျတာပါ။ (ဒီနညျးလညျးပဲ သိပျတော့ မခဉျြလှပါဘူး )